Sida loo ordo faylasha .sh adigoo ku dhufanaaya laba jeer guji iyo terminal
Inicio >> Software >> Linux >> Sida loo ordo faylasha .sh
Ku orod .sh oo leh garaaf garaaf ah iyo qasabno jiir
Haddii aad doorbideyso inaad wax walba ku sameyso guji jiirka sidoo kale waad sameyn kartaa. Si looga dhigo inay u shaqeyso sida Windows, laba jeer guji faylka wayna bilaabmaysaa. Waxaa jira 2 talaabo oo aad u dhaqso badan in la jaangooyo.
Waxa ugu horreeya ayaa ah in la doorto in loo sheego in faylka la fulin karo
Tag meesha feylku ku yaalo kuna guji badhanka midig. Liis ayaa la soo bandhigi doonaa waana bixinaynaa guryaha
Waxaad doorataa jeegga U oggolow faylka inuu socdo. sidan ayaan ku siineynaa rukhsad dil ah
Waxaan ka faa'iideysan karnaa inaan wax ka beddelo tabka Ku fur, taas oo ah barnaamijka aan u dooranno Aprilos inuu yahay mid iska caadi ah, haddii aan halkii ka fulin lahayn waxaan dooneynaa inaan furno oo aan aragno waxa ku jira. Waxaan isticmaalaa Gedit ama Visual Studio Code
Markaa waa inaanu habaynaa maamulaha faylka
Ugu dambaynti maareeyaha faylka tag menu-ka oo xulo doorashooyinka iyo tab Dhaqanka halkaasna waad uga sheegi kartaa waxaad rabto inaad ku sameyso feylka.
Waxaa jira dhowr ikhtiyaar. Faylka fur, socodsii ama na weydii. Waxaan doortay inaan na waydiiyo. Oo sidaas waa naloo tusi doonaa.
Orod la .sh la terminal
Waxaan fureynaa terminal, oo leh Ctrl + Alt + T, furaha furaha iyo qoritaanka terminal ama astaamaha qolof ee aan had iyo jeer ku haysto Ubuntu launcher, kaalay, dhinaca bidix ee bidix.
Qaabka loo socodsiinayo waa in la aado galka uu faylka ku yaalo. qiyaasi inaan ku hayno faylka ok.sh faylasha / qoraallada / galka
Waxaan ku soo galeynaa qoraallo (waa inaad u kacdaa jidka aad ku haysato)
Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aan socodsiino, waa inaan siino rukhsadda faylka
Hadana waanu socodsiinaa
Oo voila halkan waa taxanaha
Kiiskeena, "Ok" wuu soo baxayaa maxaa yeelay waxaan galnay waxa qoraalkaasi sameeyo.
Waxa ugu muhiimsan iyo waxa dadku khaladaadka ugu badan ku dhacaan ayaa ah dariiqa, dariiqa, iyadoo aan la marin galka feylka lagu fulinayo.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ka tag faallo.
Dheeraad ah hadaad rabto inaad waxbarto
Waxyaabo yar hadaad rabto inaad waxbarto. Waxaa jira amarro badan oo lagu socodsiinayo .sh aad sameyn karto
./file.sh the. waxay muujineysaa in feylku ku jiro galka hadda jira, haddii aadan ku wadi karin wadada loo maro feylka / to / file.sh
Amar kale oo lagu ordo marka lagu daro ./sh file waa
sh faylka sh
1 Ku orod .sh oo leh garaaf garaaf ah iyo qasabno jiir
1.1 Waxa ugu horreeya ayaa ah in la doorto in loo sheego in faylka la fulin karo
1.2 Markaa waa inaanu habaynaa maamulaha faylka
2 Orod la .sh la terminal
3 Dheeraad ah hadaad rabto inaad waxbarto